စက်တင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၇ မေ ၃၁၊ ၂၀၂၀
နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာ ၅
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ် H.E. Mr. Sun Guoxiang ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ် များအား NCA လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ရပ်တည်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသ အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်များအပေါ် အပြန်အလှန် အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးကြသည်။
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ သည္ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အာရွေရးရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ H.E. Mr. Sun Guoxiang ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုသည္။
ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအား NCA လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရပ္တည္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ အျပန္အလွန္ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ေဆြးေႏြးၾကသည္။
Myanmar National League 2019 ဒုတိယအကျော့အဖွင့်ပွဲစဉ်ဖြစ်သည့် Shan United အသင်းနှင့် Chinland FC အသင်းတို့အကြိတ်အနယ်ယှဉ်ပြိုင်၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကြည့်ရှုအားပေး